व्यक्तित्व – दैनिक अभियान
किसान समुदायभित्रै ओझेलमा परेका किसान– महिला किसान
"नेपाालको कृषिमा प्रमुख श्रमशक्तिको रुपमा महिला किसानको योगदान रहेको छ । ६५.६ प्रतिशत जनसंख्याको मुख्य पेशा कृषि रहेकोमा महिलाको सहभागिता ७२प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको ६०.३ प्रतिशत छ । कृषि उत्पादनको प्रमुख श्रोतको रुपमा रहेको भूमिमाथि महिलाको स्वामित्वलाई हेर्दा जम्मा १९.७ प्रतिशत महिलाका नाममा जमिन रहेको छ । त्यसमा पनि कृषियोग्य भूमि १० प्रतिशत मात्र रहेको छ । महिलाको नाममा रहेको भूमिमा पनि पू
मजदुर र कलाकारलाई पिडितद्वारा राहत वितरण
तुलसीपुर । संचारकर्मी एवं चलचित्र निर्देशक केएल पीडितले लकडाउनका कारण संकटमा परेका दाङका संचारकर्मी, प्रेस मजदुर एवं कलाकारहरुलाई राहत वितरण अभियान शुरु गर्ने भएका छन् ! नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पीडितले संकटमा रहेकाहरुको विवरण संकलन गरिरहेको बताए ! "अहिले आर्थिक संकट झेलिरहेका संचारकर्मी, प्रेस मजदुर एवं कलाकारहरुको अवस्था बुझ्दैछु ! सबै विवरण तयार गरेर राहत वितरण
रुकुममा जातिय विभेद भ्रम र यथार्थ
पश्चिम रुकुम मोहन आचार्य । जातिय विभेद एक मानवता विरोधी र अन्यायपुर्ण व्यवहार हो । यो आधुनिक र सभ्य समाजमाथिको कालो धब्बा हो । मानवीय मर्यादा तथा प्रतिष्ठामाथिको ठाडो आक्रमण र हस्तक्षेप हो । जातिय विभेद कुनै न कुनै रुपमा संसारका सवैजसो देशहरुमा देखिन्छ । संसारभर जातिय विभेदका प्रकृतिलाई हेर्दा फरक–फरक आधारहरु भेटिन्छन। ति आधारहरुमध्ये जन्म,वंश,वर्ण,छालाको रंग, कपालको रगं आदि मु्ख्य हुन
राजीनामा दिएर विदाई भए अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं, १९ भदौ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदबाट राजिनामा गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजिनामा बुझाएका हुन् । त्यसअगाडि उनी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बिदाई कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चूनौतीपूर्ण अवस्थामा आफुले जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै जग बसाल्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वित्तीय संघीयतामा
स्वाभिमानीको अध्यक्षमा भण्डारी चयन
नव निर्वाचित अध्यक्ष गोपाल भण्डारी हापुरे, साउन ३२ । स्वामिमानी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्षमा गोपाल भण्डारी चयन भएका छन् । शनिवार बबई गाउँपालिका, दाङको सभाहलमा सम्पन्न संस्थाको ९ औं साधारण सभाले भण्डारीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय नयाँ सञ्चालक समिति चयन गरेको हो । संस्थाको ९ औं बार्षिक साधारणसभा पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि माननीय हिरा चन्द्र केसी अन्य पदाधीकारी
के छ मेरो रहर कसैले बुझ्दै बुझ्दैन्न !! कस्तो छ म बस्ने सहर बुझ्दै बुझ्दैन्न !! अरु को इच्छा बिपरीत मन्छे कसरी जान्छ होला ? ठिक छ कि बेठिक खबर बुझ्दै बुझ्दैन्न !!
पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीमाथि कांग्रेसद्वारा कारबाही
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, महासमिति सदस्य पुष्करनाथ ओझा र डडेलधुरा जिल्ला कार्यालय सचिव रामबहादुर विष्टलाई कारबाही गरेको छ । शनिबार बसेको अनुशासन समितिको बैठकले जोशी र ओझालाई ५ ५ वर्ष र विष्टलाई ३ वर्ष पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । अन्तिम स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र अनुशासन समित
नीति र विचार एउटाको नेतृत्व अर्कैको हुदा पार्टीमा संकट बढ्यो-प्रचण्ड
"पुष्पलालले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्नुभयो । तर, २००८ सालपछि उहाँलाई नेतृत्वबाट हटाइयो । पछि महासचिव बन्नबाट रोकियो । २०१४ सालमा पुष्पलालको नीति र विचार पारित भयो । पार्टी उहाँको नीति र विचारमा चल्यो तर नेतृत्व रायमाझी (केशरजंग रायमाझी) को भयो । नीति एउटाको तर नेतृत्व त्यसका विरोधीको । तपाई हामीले यसो हेर्‍यौं भने अहिले पनि त्यस्तै भएको हो कि ?" कम्युनिष्ट पार्टीभित्र हुने संघर्
तीजले महिलालाई स्वतन्त्र होइन दाश बनाउँछ
गायिका सोफिया थापाले गाएको गीत ‘नो ब्रत प्लिज’ बोलको गीतसँगै त्यसको नृत्य भिडियो सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक भए लगत्तै एकथरि धार्मिक अतिवादीहरुको प्रतिक्रिया सोफिया थापामाथि यसरी खनियो मानौं समाज सुधार, धार्मिक सुधार, परिवर्तन र समानताको गीत गाएर उनले अक्षम्य अपराध गरिन् । उनले जानकारी गराए अनुसार गीतको विरुद्धमा विश्व हिन्दु युवा संघको नाउँमा विज्ञप्ति मात्र आएन, बरु उनलाई धम्कीपूर्ण सन्देश र कलह
इन्टरनेट को “दुरुपयोग” र सामाजिक सञ्जालमा विकृति!
सर्वसाधारण देखि उच्चस्तरको पदस्थ सम्म प्रयोग हुने भएकाले हेर्दा सामान्य देखिए पनि संचार माध्यम आफैमा दैविक संयोग जस्तै सर्वशक्तिमान छ! संचार को सहि सदुपयोग गर्नेहरू का लागि कसैलाई पुनर्जीवन दिन सफल भएको छ भने कसैलाई मान प्रतिष्ठा को उचाइमा पुर्याएको त यसैलाई दुरुपयोग गर्नेहरू नर्कमा हाम फाल्न पछि परेका छैनन्! परिबन्ध ले भुलि सकेका आफन्तहरू को भेट गराएको छ असल मित्रता जोड्ने र ज्ञानको माध्यम बनेक